Shiinaha CNC Vertical Machining Center warshad iyo soosaarayaasha | Oturn
Xarunta Mashiinka 'OTURN' waxay ka samaysan tahay tayada ugu fiican Mihanna jirka birta lagu kabo iyo taageerada feeraha oo buuxa, taas oo toban laab ka naxdin badan silig birta caadiga ah. Tuurista feeraha ku yaal gudaha fuselage-ka ayaa siyaado ah
Xarunta Mashiinka OTURN waxay ka samaysan tahay tayada ugu fiican Mihanna jirka birta lagu kabo iyo taageerada feeraha oo buuxa, taas oo toban laab ka naxdin badan silig birta caadiga ah. Tuurista feeraha ku yaal gudaha fuselage-ka ayaa leh iska caabin aad u sarreeya iyo caabbinta shoogga. Intaa waxaa dheer, bannaanka ballaaran ee gudaha wuxuu u oggolaanayaa hawlwadeenku inuu si fudud u beddelo qalabka iyo walxaha shaqada. Qaab dhismeedka adag ee adag, waxay abuurtaa raad yar, laakiin saxnaan sare iyo mashiinno otomaatik ah oo bakteeriyo badan leh.
Ou Teng waxay isticmaashaa sumado caan ah oo adag oo adag iyo biraha istiraatiijiga ah ee toosan. Tiknoolajiyaddeeda farsamadu waa sida wax soo saarista wax soo saarka, oo leh nadiifin eber ah iyo dabeecadaha dhalista oo dhan. Bogga toosan wuxuu leeyahay adeegsi hooseeya, saxnaan sarreeya, iyo xawaare dhaqso leh, illaa 48 mitir daqiiqaddii.
Mashiinka waxaa lagu qalabeeyay laydh shaqo oo dhalaalaya, taas oo ku habboon hawlwadeenka inuu raro oo dejiyo qalabka shaqada oo uu cabbiro. Iftiinka shaqadu wuxuu leeyahay shaqooyinka u eg boodhka, biyuhu iyo waxyaabaha u diidaya qarax.
Qalab is-weydaarsi aalad deg deg ah, fudud, la isku halleyn karo iyo nolol-dheer ayaa siisa is-weydaarsi qalab siman oo lagu kalsoonaan karo. Naqshadaynta qalabka isdhaafsiga aaladda gaarka ah, awoodda lagu doorto aaladda meel kasta, waxaa si dhakhso leh u gaari kara kantaroolka barnaamijka PLC.
X safarka dhidibka
Y dhidibka safarka
Z dhidibka safarka
Fogaanta sanka dunmiiqa ilaa shaashadda shaqada
Fogaanta bartamaha dunmiiqa illaa dusha sare ee jidka
Xamuulka ugu badan ee shaqada
Ka saarista qashinka muquuninta ah
Qalabka mashiinka laba jibbaarada ah, oo lagu feerayo mashiinka mashiinka ciribtirka ee labada dhinac ee mashiinka, wuxuu si sahal ah ugu diri karaa mashiinada birta ah ee la farsameeyay meel ka baxsan mashiinka si deg deg ah, taasoo yareyneysa qashinka waqtiga aan shaqeyneyn sababtoo ah ka saarista guntimaha birta .
Dhamaan mashiinada waxay isticmaalaan cabirka leysarka, baaritaanka goynta, tijaabada mudada dheer ee socota iyo kormeerka adag sida waafaqsan heerka VDI 3441, si dhidib kasta uu u yeesho soo celin wanaagsan iyo meeleyn sax ah, hubinta saxnaanta mashiinka.
Qalabka cabbiraadda wareegsan ee Renishaw waxaa loo isticmaalaa in lagu saxo wareegga iyo saxsanaanta joomatari ee mashiinka, taas oo markaa lagu hubinayo laguna hubinayo saxnaanta toosan ee booska saddex-geesoodka ah.
Naqshadeynta dunmiiqa nooca-gacmeedku wuxuu bixiyaa 6000 / 4500rpm dunmiiqa maareynta lagu wado ama dunta nooca suunka ah, iyo dhalidda dunmiiqa-gaaban ayaa si wax ku ool ah u taageerta gacanka iyo madaxa tuurista, sidaa darteed waxay si weyn u hagaajin kartaa adkaanta dunmiiqa. Mashiinka dunmiiqa ayaa soo bandhigi kara xaddiga goynta birta ugu badan. Nidaamka qaboojinta dunmiiqa, kor u kaca heerkulka culeyska ayaa la dhimi karaa si loo dheereeyo nolosha dunmiiqa.
Hore: Nooca Gawaarida 5-dhidibka Milling Machine
Xiga: Nooca Flat